Fandaharana 8 tsara indrindra hamafa amin'ny PC 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Fandaharana 8 tsara indrindra hamafa amin'ny PC
Rindrambaiko fitehirizana sary miisa 8 tsara indrindra amin'ny PC
Izay mila mpamorona sary mihetsika dia afaka manana safidy maromaro, na mampidina amin'ny solosaina na mampiasa amin'ny Internet amin'ny fitetezana. Misy fitaovana mamela anao hamorona fampisehoana miaraka amin'ny lahatsoratra, mozika, sary ary horonan-tsary. Amin'ny maro amin'izy ireo dia tsy ilaina akory ny fananana traikefa amin'ny fampiharana an'io karazana io mba hanatsarana azy ireo. Zahao hoe!
Prezi dia mety ho safidy mety indrindra ho an'ireo izay te-hamorona fampisehoana mavitrika. Ny slide dia manao hetsika marani-tsaina ary mampitombo ny masonao amin'ny zava-dehibe. Misy safidy maromaro ho an'ny maodely efa vonona izay azo ovaina tanteraka, ahafahanao mampiditra sary, horonan-tsary YouTube, ary sary.
Ny drafitra maimaim-poana (Basic) dia ahafahanao manamboatra tetikasa hatramin'ny 5, izay hitan'ny mpampiasa hafa ny serivisy. Afaka manasa olon-kafa hanova ny asanao amin'ny Internet ianao.
Prezi (maimaim-poana, miaraka amin'ny safidin'ny drafitra fandoavam-bola): Web
PowerPoint dia iray amin'ireo mpisava lalana raha ny amin'ny fampisehoana slama. Ny programa dia manolotra modely am-polony sy isan-karazany ny fifandimbiasam-bola sy ny vokatry ny sarimiaina. Azo atao ny mampiditra horonan-tsary, sary, mozika, sary, latabatra, ankoatry ny singa hafa.
Ny mpampiasa koa dia afaka miantehitra amin'ny asan'ny firaketana an-tsary ny fampisehoana, ao anatin'izany ny fitantarana. Ary koa ny fandraisana an-tsoratra izay tsy hitan'ny mpanatrika fotsiny. Ny rindrambaiko dia mazàna ho intuitive be ho an'ireo izay efa mampiasa rindranasa hafa ao amin'ny suite an'ny Office.
PowerPoint (aloa): Windows | macOS
PowerPoint an-tserasera (maimaim-poana, miaraka amina safidy drafi-bola): Web
Zoho Show dia rindrambaiko mitovy amin'ny PowerPoint, miaraka amin'ny tombony azonao maimaimpoana. Ny serivisy dia mifanaraka amin'ny rindrambaiko Microsoft ihany koa, afaka manokatra sy mitahiry ny atiny ao amin'ny pptx. Aterineto, ahafahanao manitsy miaraka amina olona 5 nefa tsy mila mandoa vola.
Manolotra modely sy lohahevitra mihetsiketsika am-polony ilay fampiharana, izay azo afangaro mora foana. Azo atao ny mampiditra sary, GIF ary horonan-tsary (avy amin'ny PC na YouTube) ary mampiditra rohy avy amin'ny Twitter sy tranokala sasany, toa ny SoundCloud. Misy ihany koa ny fitaovana ho an'ny vokadin'ny tetezamita sy ny fanovana sary.
Zoho Show (maimaim-poana, ho safidy amin'ny drafitra karama): Web
Google Slides (na Google Slides) dia ao anatin'ny fonosana Drive. Miaraka amin'ny interface mora ampiasaina, dia manome safidy lohahevitra eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery. Ny asan'ny fanovana modely dia misongadina ao amin'ny baraovana.
Ny olona dia afaka mamono ny tetik'asa amin'ny fotoana iray, fa ny mpamorona no mampahafantatra ny rohy na manasa azy. Ny fampiharana dia ahafahanao mampiditra sary, feo, tabilao, sary, kisary, horonan-tsary YouTube, sns. Ny valiny dia azo jerena an-tserasera na voatahiry amin'ny pptx, PDF, JPEG, ankoatry ny endrika hafa.
Fampisehoana Google (maimaim-poana, miaraka amin'ny safidy amin'ny drafitra karama): Web
5. Fihaonambe ifanarahana
Fandaharana teratany ho fampisehoana ireo fitaovana Apple, Keynote dia manana maodely maromaro voaomana ho an'ireo izay tsy te handany fotoana. Mbola am-polony ny vokatry ny tetezamita. Azonao atao ny manasongadina lahatsoratra amin'ny aloka sy volony ary manoritra ny lalan'ny zavatra, toy ny endrika sy sary.
Ny mpampiasa dia afaka mampiditra sary, horonan-tsary, mozika, ankoatry ny singa hafa. Raha alefa ny fampidirana iCloud dia azo atao ny manova amin'ny olon-kafa na dia mampiasa Windows aza izy ireo. Ny fampiharana dia afaka mamaky tetikasa pptx ary hitahiry azy ireo amin'ny endrika rindrambaiko Microsoft.
fototra (maimaim-poana): macOS
6. Tena lehibe
Ny genally dia safidy hanaovana slide mahafinaritra nefa tsy manana fahalalana momba ny fampiharana fampisehoana. Manolotra maodely maromaro ny tranonkala, miaraka amina endriny maro karazana. Misy safidy ho an'ny slide miaraka amin'ny lisitra asongadina, sary na andian-teny, fandaharam-potoana ary maro hafa.
Ka ampiasao ireo izay ilainao ary ario ny hafa. Azonao atao ny manitsy ny tsirairay avy ary mampiditra sary, GIF, horonan-tsary ary horonam-peo, ary koa sary mifanerasera. Ny hany zavatra tokana dia misy ny kinova maimaimpoana ho an'ny mpampiasa hafa ny serivisy.
Azo inoana (maimaim-poana, miaraka amin'ny safidy amin'ny drafitra karama): Web
Icecream Slideshow Maker dia safidy hafa ho an'ireo izay maniry ny misintona ny programa amin'ny PC ary miasa ivelan'ny Internet. Ny fampiharana dia natao hamoronana fampisehoana sary amin'ny mozika.
Saingy azo atao ny mampiditra atiny an-tsoratra sy mampiasa audio samihafa ho an'ny slide tsirairay na hira iray ihany mandritra ny tetikasa. Ny kinova maimaim-poana dia mamela anao hitahiry ny valiny amin'ny Webm fotsiny ary manolotra fetra 10 sary isaky ny fampisehoana.
Ice Cream mpamorona sary mihetsika (maimaim-poana miaraka amin'ny loharanom-bola voafetra): Windows
Adobe Spark dia mpamoaka lahatsoratra an-tserasera izay manolotra fitaovana fampisehoana intuitive. Ho fanampin'ireo safidy lohahevitra, misy ihany koa ireo volavolan-tsipika azo tsindriana eo ankavanan'ny efijery. Azo atao ny mampiditra sary, horonan-tsary, lahatsoratra, mozika ary koa firaketana ny feonao.
Ny faharetan'ny sary tsirairay dia azo ovaina mora foana, eo amin'ny zorony ambany ankavanana. Raha te-hamorona tanana marobe ianao dia azonao zaraina ilay rohy na manasa izay tianao. Ny atiny dia azo jerena an-tserasera na alaina amin'ny endrika video (MP4). Ny kinova maimaim-poana dia misy ny sary famantarana Adobe Spark.
Adobe Spark (maimaim-poana, fa efa nandoa drafitra): Web
Soso-kevitra amin'ny fanaovana sary mihetsika mahafinaritra
Ireto torohevitra manaraka ireto dia avy amin'i Aaron Weyenberg, UX Leader ho an'ny TED, tetikasa fihaonambe fohy misy lohahevitra. Ny atiny dia misy amin'ny TEDBlog mihitsy. Zahao ny sasany amin'izy ireo.
1. Eritrereto ny mpihaino
Aza mieritreritra ny slide ho fitaovana fanamarihana hanoratanao ny famelabelaranao. Tsy maintsy atao ho an'ny besinimaro izy ireo, amin'ny fijerena ny fandefasana traikefa an-tsary manampy an'izay voalaza.
Aza miditra amin'ny lahatsoratra loatra. Raha ny filazan'i Weyenberg dia mampisaraka ny sain'ny mpanatrika izany, izay tsy mahalala na hamaky izay voasoratra na hihaino izay voalaza. Raha tsy misy safidy hafa dia zarao ao anaty lohahevitra ny atiny ary asehoy azy tsirairay avy.
2. Tazomy ny fenitra hita maso
Miezaha hihazona ny loko, ny sokajin-tsoratra, ny sary ary ny tetezamita mandritra ny fampisehoana.
3. Aza be loatra ny vokany
Tsy mampiasa tetezamita koa io. Ho an'ny manam-pahaizana, ny safidy manaitaitra kokoa dia manome ny fiheverana fa ho mankaleo be ny fampisehoana ataon'izy ireo ary ireo vokatra mihoa-pampana ireo ihany no hampiala ny mpanatrika amin'ny alahelony.
Lazao amin'ny fomba maotina ny fampiasana ireo loharano ireo ary aleo amin'ireo izay misoko mangina kokoa fotsiny.
4. Aza mampiasa autoplay amin'ny horonan-tsary
Ny programa fampisehoana sasany dia ahafahanao milalao horonantsary raha vantany vao misokatra ilay slide. Nanazava i Weyenberg fa matetika dia mila fotoana vao manomboka milalao ilay rakitra ary tsindrio ilay mpanolotra indray mandeha indray mandeha mba hanandramany sy hanombohany.
Valiny: ny slide manaraka dia mifarana tsy ho ela. Mba hisorohana ireo karazana fameperana ireo, ny safidy tsara indrindra dia ny tsy misafidy ny tena fandikana.
Nanoro hevitra i SeoGranada:
Fampiharana maimaim-poana hanaovana horonan-tsary misy sary sy mozika amin'ny findainao
Ahoana ny fomba hanaovana faneva amin'ny PowerPoint nefa tsy fantatrao ny fomba fanovana
Mpanonta lahatsoratra an-tsoratra maimaimpoana sy maimaim-poana
Fomba fividianana sary watermark amin'ny alàlan'ny telefaona sy PC
Ny fampiharana 7 tsara indrindra izay manova ny lokon'ny volo amin'ny fotoana tena izy
Ahoana no hahalalana raha tena izy ilay iPhone na tsia fa tsy ho voafitaka
Ny programa webcam tsara indrindra 8 ho an'ny Windows, macOS, ary Linux
Ahoana no hahalalana raha misy lalao mandeha amin'ny PC-ko
Fampiharana toetrandro 6 ka tsy mahataitra anao ny toetr'andro
Fandaharana 8 hamoronana lalao amin'ny PC na dia tsy fantatrao aza ny fomba fandaharana
Mpijery sary 10 tsara indrindra hisolo ny fampiharana Windows
Fandaharam-potoana 6 hamoronana kapila tselatra bootable ho an'ny Windows, Linux ary macOS
Vaovao marina na sandoka: ahoana no hilazana raha diso na marina ny vaovao iray
Ahoana ny fomba fandefasana sary sy horonan-tsary amin'ny tantara Instagram amin'ny PC amin'ny 2020
Kitendry tsy namboarina - ahoana no hamahana sy hamahana ilay olana